कर्णालीका मन्त्रीलाई ब’ला’त्कारको बात : के–के भयो अहिलेसम्म ? — Imandarmedia.com
कर्णालीका मन्त्रीलाई ब’ला’त्कारको बात : के–के भयो अहिलेसम्म ?
काठमाडौ। कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही विवादमा तानिएका छन् । हालै सार्वजनिक एउटा भिडियोका आधारमा उनीमाथि ब’ला’त्कारको आरोप लागेको छ । यद्यपि, पीडित भनिएकी महिलाले आफूमाथि त्यस्तो कुनै घटना नभएको भन्दै सफाइ दिएकी छिन् ।
उनले आफू पीडित भएको आफूलाई नै महसुस नभएको पनि बताइन् । ‘बिना कारण मलाई आज नखाएको विष लागेको छ । न म अन्यायमा छु, न त म बलात्कृत महिला हो । ममाथिको ब’ला’त्कारको विषय थियो भने मलाई किन सोधिएन ?’ उनले भनिन्, ‘अनुमति बिना अर्काको समाचार लेख्न पाइन्छ र ? पत्रकार र सामाजिक सञ्जालले जबरजस्ती बलात्कृत बनाउँदैछन् ।’
कँडेलले अरूले बोल्दा ‘विरोधीले बोलेको’ अर्थ लगाइने गुनासोसमेत गरेका छन् । ‘पीडित पक्ष कुटिन्छ, प्रहरीले उद्धार गरेको भन्छ, मन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिले भौतिक कारबाही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘समाचार लेख्ने पत्रकारको भगाभागको अवस्था । प्रशासन छ तर व्यवहारमा नभएको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीज्यू ! अझै केही भएको छैन भन्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको प्रमुखलाई सोध्नुहोस्, सबै थाहा पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशको सम्मानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुहोस्, अन्यथा….।’